ဖေါ်ပြချက်:ဆွဲငင်အားဆလင်ဒါအထူ,ရှိုဝက်အူထူ,မြန်နှုန်းမြင့်အဝတ်လျှော်စက်,အမွှာ - ပိုက်ကွန်ညှစ်, အထူထူစက်,ဝက်အူစာနယ်ဇင်း Thickener
Home > ထုတ်ကုန်များ > အထူနှင့်အဝတ်လျှော်ကိရိယာများ
အထူနှင့်အဝတ်လျှော်ကိရိယာများ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဆွဲငင်အားဆလင်ဒါအထူ, ရှိုဝက်အူထူ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, မြန်နှုန်းမြင့်အဝတ်လျှော်စက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အမြန်နှုန်းပျော့ဖတ်အဝတ်လျှော်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OCC Pulper အဝတ်လျှော်စနစ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ပျော့ဖတ်အဝတ်လျှော်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်ရုံအတွက်အထူပစ္စည်းကိရိယာများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Kraft စက္ကူစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရှိုဝက်အူထူ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပျော့ဖတ်ခြင်းအတွက်တစ်လုံးတည်းနှင့် Double Screw Press Thickener  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူပျိုဝက်အူရှိုအထူ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အနိမ့်တသမတ်တည်းပျော့ဖတ်ထူပစ္စည်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူပြုလုပ်ရေးစက်အတွက် Disc Thickener  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်မားသောစက္ကူပျော့ဖတ်စက်အထူ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူပျော့ဖတ်ရေဖျန်းခြင်းနှင့်ဆေးကြောခြင်း Gravity Cylinder Thickener  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မှင်ပျော့ဖတ်မြန်နှုန်းမြင့်အဝတ်လျှော်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Gravity Cylinder Thickener Pulping ပစ္စည်းကိရိယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူပျော့ဖတ်လုပ်စက်အတွက် Gravity Cylinder Thickener  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Gravity Cylinder Thickener သည်စက္ကူထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြန်နှုန်းမြင့် Pulp အဝတ်လျှော် - အ ထူနှင့် အဝတ်လျှော် ပစ္စည်းကိရိယာများ မြန်နှုန်းမြင့်အဝတ်လျှော်စက်အသုံးပြုခြင်း ၎င်းသည်ရော်ဘာဖုံးအုပ်ထားသော roller အမြန်နှုန်းလည်ပတ်မှုမှရရှိသော centrifugal force နှင့် roller နှင့် net ကြားရှိ extrusion force...
OCC Pulper အဝတ်လျှော်စနစ်စက်
OCC Pulper အဝတ်လျှော်စနစ်စက် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ မြန်နှုန်းမြင့်အ ၀ တ်လျှော်စက်သည်မျိုးဆက်သစ်အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်စုစည်းထားသောပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည်။...
စက္ကူပြုလုပ်ခြင်း - အထူနှင့်အဝတ်လျှော်စက်များအတွက်မြန်နှုန်းမြင့် Pulp အဝတ်လျှော်စက် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ မြန်နှုန်းမြင့်အ ၀...
Supply နိုင်ခြင်း: 600 Sets per year
2500 အမျိုးအစား Disc အထူ - အထူနှင့်အဝတ်လျှော်ပစ္စည်းကိရိယာများ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ (၁) Disc Thickener သည်ပျော့ဖတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပျော့ပျောင်းစွာပျော့ပျောင်းစေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ၂။ ၎င်းတွင်ပန်ကာဗန်း၊ အလယ်ပိုင်းပြွန်၊...
Kraft စက္ကူစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရှိုဝက်အူထူ မိတ်ဆက် Inclined Screw Thickener သည်ထူထဲ ပြီးအ ၀ တ်လျှော်စက်များဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဓာတုဖိုင်ဘာစက်မှုလုပ်ငန်းများ၌အမှုန့်များကိုအာရုံစူးစိုက်စေရန်နှင့်ဆေးကြောရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။...
ပျော့ဖတ်ခြင်းအတွက်တစ်လုံးတည်းနှင့် Double Screw Press Thickener
ပျော့ဖတ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်တစ်ကိုယ်ရေနှင့်ဒေါက်ဖိအားအထူနှစ်ထပ်စာချုပ် - အဝတ်လျှော်စက်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ ဤစက်ကိုအဓိကအားဖြင့်အနက်ရောင်အရက်များကိုချက်ပြုတ်ထားသောဂျုံကောက်ရိုးနှင့်အစေးစက္ကူပျော့ဖတ်များထုတ်ယူရာတွင်အသုံးပြုသည်။...
ရှိုဝက်အူပိုထူ - အဝတ်လျှော်ပစ္စည်းကိရိယာများ Thickener အမျိုးအစားများ - Disc Thickener, Screw Press Thickener, Gravity Cylinder Thickener ။ ရှိုသောဝက်အူထူအပလီကေးရှင်း - ပျော့ဖတ်အမျိုးမျိုးကိုထူပြီးဆေးကြောရာတွင်အသုံးပြုသည် အင်္ဂါရပ်များ:...
အနိမ့်တသမတ်တည်းပျော့ဖတ်အထူပစ္စည်းကိရိယာများ / အထူနှင့်အဝတ်လျှော်ပစ္စည်းကိရိယာများ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ၁။ Disc Thickener သည်ပျော့ဖတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပျော့ပျောင်းစွာပျော့ပျောင်းစေရန်အတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ၂။ ၎င်းတွင်ပန်ကာဗန်း၊...
စက္ကူပြုလုပ်ရန်စက်အတွက်အထူထူစက် - အထူနှင့်အဝတ်လျှော်စက်များ အသုံးပြုခြင်း - ပျော့ပျောင်းစွာပျော့ပျောင်းစေရန်အသုံးပြုသည် အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ -...
အရည်အသွေးမြင့်မားသောစက္ကူပျော့ဖတ်ဒိုင်ထူ - အထူနှင့်အဝတ်လျှော်စက်များ ကွဲပြားခြားနားသောဒိုင်အ တုံးများ Dia: 2500mm နှင့် 3500mm အထူပိုမိုထူထပ်သောDiscရိယာကိုစစ်ထုတ်: ၆၀-၂၄၀ m2 နိဒါန်း - Disc Thickener သည်အဓိကအားဖြင့်ပျော့ဖတ်နှင့် papermaking...
စက္ကူပျော့ဖတ်ရေဖျန်းခြင်းနှင့်ဆေးကြောခြင်း Gravity Cylinder Thickener
စက္ကူပျော့ဖတ်မိုးရေကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆေးကြောခြင်း Gravity Cylinder Thickener-Thickener And Washer Equipment Gravity Cylinder ထူသောအရာ အနိမ့်ကိုက်ညီမှုပျော့ဖတ်အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ထူအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဝိသေသလက္ခဏာများ:...
မှင်ပျော့ဖတ်မြန်နှုန်းမြင့်အဝတ်လျှော်စက် မြန်နှုန်းမြင့်အဝတ်လျှော်စက်ကိုယ်ရေးဖိုင်: ဒါဟာ Pulper အဝတ်လျှော်အထူစနစ်အသုံးပြုသည်။ Waster စက္ကူကုသစနစ် Pulp အဝတ်လျှော်အင်္ဂါရပ်များ: ဖိအားအမျိုးအစားသေနတ်သမား, ပျော့ဖတ်အထူများနှင့်ကောင်းစွာဖြန့်ဝေ...
Gravity Cylinder Thickener Pulping ပစ္စည်းကိရိယာ
Gravity Cylinder Thickener Pulping ပစ္စည်း - အထူနှင့်အဝတ်လျှော်စက်များ Gravity Cylinder ထူသောအပလီကေးရှင်းများ ၎င်းသည်စက္ကူပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ပျော့ဖတ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်မှုနည်းသောသို့မဟုတ်သိုလှောင်ထားနိုင်မှုနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။...
စက္ကူပျော့ဖတ်လုပ်စက်အတွက် Gravity Cylinder Thickener
စက္ကူပျော့ဖတ်လုပ်စက်အတွက် Gravity Cylinder Thickener လျှောက်လွှာ ၎င်းသည်စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပျော့ဖတ်ဖြစ်စဉ်တွင်အနိမ့်တသမတ်တည်းရှိသောစတော့ရှယ်ယာများ၏အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ရေယိုဖိတ်မှုနှင့်သင့်တော်သောအတုံးနှင့်အဝတ်လျှော်စက်များဖြစ်သည်။...
Gravity Cylinder Thickener သည်စက္ကူထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများ
Gravity Cylinder Thickener စက္ကူထုတ်လုပ်သည့်စက်များ - အထူနှင့်အဝတ်လျှော်စက်များ လျှောက်လွှာ ၎င်းသည်စက္ကူပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ပျော့ဖတ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်မှုနည်းသောသို့မဟုတ်သိုလှောင်ထားနိုင်မှုနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆွဲငင်အားဖြင့် filter...
စက္ကူပျော့ဖတ်မိုးရေကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆေးကြောခြင်း Gravity Cylinder Thickener-Thickener And Washer Equipment Gravity Cylinder ထူသောအပလီကေးရှင်းများ အနိမ့်ကိုက်ညီမှုပျော့ဖတ်အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ထူအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထူသောအမျိုးအစားများ:...
တရုတ်နိုင်ငံ အထူနှင့်အဝတ်လျှော်ကိရိယာများ ပေးသွင်း
ဆွဲငင်အားနှင့်အဝတ်လျှော်စက်ကိရိယာများသည် Gravity Cylinder Thickener၊ Inclined Screw Thickener၊ မြန်နှုန်းမြင့်အဝတ်လျှော်၊ Twin-net ညှစ်စက်၊ Disc Thickener, Screw Press Thickener ။
ဆွဲငင်အားဆလင်ဒါအထူ ရှိုဝက်အူထူ မြန်နှုန်းမြင့်အဝတ်လျှော်စက် အမွှာ - ပိုက်ကွန်ညှစ် အထူထူစက် ဝက်အူစာနယ်ဇင်း Thickener ဆွဲငင်အားဆလင်ဒါအထူစက္ကူစက် ဆွဲငင်အားဆလင်ဒါပိုစက်စက်